लक-डाउन पछि भेटि`एका पुजा र आका`शले आफ्नो प्रेम र विवाहको बारेमा यसरी खुलेरै बोले (भिडियो हेर्नुस्) – Eshankharapur
यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला हुन्छन् माता लक्ष्मीका प्रिय
रोकिएन प्रर्दशन: झन् झन् कडा, कुलमानको पक्षमा जागे जनता ! बीच सडकमै हेर्नुस – प्रहरीलाई पर्यो आपत (हेर्नुहोस भिडियो)
आजबाट विद्यार्थीले यसरी प्रयोग गर्नुहोस् नि:शुल्क इन्टरनेट, जानकारी सबैमा सेयर गरौँ [ तरिकासहित ]
अब हप्ताको दुई सार्वजनिक बिदा दिने !
मुख्य पृष्ठ /News/लक-डाउन पछि भेटि`एका पुजा र आका`शले आफ्नो प्रेम र विवाहको बारेमा यसरी खुलेरै बोले (भिडियो हेर्नुस्)
लक-डाउन पछि भेटि`एका पुजा र आका`शले आफ्नो प्रेम र विवाहको बारेमा यसरी खुलेरै बोले (भिडियो हेर्नुस्)
आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्मा फि`ल्म क्षेत्रमा निकै मन पराइएको जोडी हो । उनीहरु`लाई फ्या`नले राम्रो जोडीका रुपमा हेर्छन । कति`पयले आकाश र पुजालाई वास्त`विक जोडीका रुपमा पनि हेरिर`हेका छन् । उनी`हरुका बीचमा वास्तवमै प्रेम सम्बन्ध रहेको दावी पनि गरेका छन् । कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउन हटेपछि आकाश अहिले आफ्नो गृह जिल्लावाट दागंवाट फर्किएका छन् । उनीहरु अहिले फेरी भेटिएका छन् । पुजाको जन्मदिनमा पनि आकाश थिइनन् ।
लक डाउन पछि उनीहरु पहिलो पटक संगै एउटै फ्रेममा आएका छन् । एक टेलि भिजन अन्त`रवार्तामा संगै देखिएका उनीहरुले आफुहरु बीच ३२ गुणमा २८ गुण मिल्ने बताएका छन् । कुनै पनि जोडी मिला`उँदा हिन्दु सं`स्कारमा दुई जनाको गुण मिलाउने परम्परा छ । त्यसमा जति धेरै गुण मिल्यो त्यती धेरै त्यो विवाह वा सम्बन्ध सफल हुने मानिन्छ । पुजाले आफुहरुको २८ गुण मिलेको बता`एकी छन् । उनीह`रुको राशि पनि एउटै हो ।
तर दर्शकले वास्त`विक जो`डीकै रुपमा बुझे पनि अहिले त्यो वास्त` विकता नभएको बताएका छन् । अहिले आफुहरु निकै मिल्ने साथी भएको बताएका छन् । पुजा`ले भनिन्, अहिले हामी निकै मिल्ने साथी हो तर भोली के हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यस्तै आका`शले पनि त्यो भविष्यले नै बताउने बताएका छन् ।
धेरै फि`ल्ममा आकाश र पुजा संगै भएकाले पनि दर्शकले यस्तो अनु`मान गरेको हुनसक्ने बताएका छन् । फिल्म निर्माताहरुले पनि दुई जनालाई नै प्राय संगै राख्ने मन`साय राख्ने भएकाले यस्तो सम्भव भएको बताए`की छन् । फिल्म क्षेत्रमा दुई जनाले फिल्ममा एक अर्कालाई अफर गर्ने गरेको आरोप लाग्ने ग`रेको छ । तर त्यो कुरा उनीहरुले भने अ `स्वीकार गरेका छन् । कहिल्यै पनि आफुहरुले एक अर्कालाई अफर नगरेको बता`एका छन् ।भिडियो हेर्न यहाँ क्लि`क गर्नुहोस्:
बिवाह भएको ६ महिनामै गायिका बबिता बानियाँ “जेरी” ले जन्माईन बच्चा
सिंगापुरे लाहुरेले आफ्नै श्रीमती सोनीको चरित्रमा प्रश्न उठाएपछि दाइले देखाए यस्ता प्रमाण, शंकाको सुइ लाहुरेतिर (भिडियो हेर्नुस्)
कुलमान घिसि`ङ्गलाई फेरी पनि सलाम, खेर गैरहेको पानीबाट देशले यति धेरै उज्यालो पाउँदै… हेरी सम्मान स्वरूप एक शेयर गरौ ।
कुलमान घिसिङलाइ हटाउन पैसाको बिटो बोकेर रातारात मन्त्रालय धाउने को हुन् ?नामै तोकेर बोले पुण्य गौतमले